Uche na Obi - Mmetụta n'ọmụmụ ihe na ikpe (akwụkwọ 467) - Rabbi Michael Avraham
Ụbụrụ na Obi - Mmetụta dị na Ọmụmụ na Ikpe (Osisi 467)
Nkwupụta 45	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
Ụbọchị ole na ole gara aga, ha bịara na peeji nke Daf La Bibamot, bụ ebe okwu dị mma nke "Ụlọ ahụ dakwasịrị ya na nwa nwanne ya pụtara na a maghị onye n'ime ha nwụrụ na mbụ, ọ na-ewepụ uwe elu ya ma ghara iru uju."
Hayuta Deutsch zigara m akụkụ a yana nkọwa ndị a:
O buru ibu! Ihe atụ bụ isi (otu n'ime ọtụtụ mana mara mma nke ukwuu) nke nhụta dị n'etiti ụwa halakhic 'laboratory' na eziokwu dị egwu (telenovela mara mma na akwa akwa).
N'oge mkparịta ụka ahụ dapụtara n'etiti anyị ka emechara, echere m na ọ dabara adaba itinye kọlụm n'ihe ndị a.
Akụkụ mmetụta uche na nke mmadụ na okwu halakhic
Mgbe ị na-eche banyere ọnọdụ a ma banye n'ime ya ntakịrị ntakịrị na ọkwa uche, ọ bụ ọdachi na-adịghị mfe nke dakwasịrị ezinụlọ a na-adịghị mma (onye ọ bụla n'ụzọ nke ya, cheta). Ma mụ onwe m dị ka onye mmụta nkịtị ahụghị ya ma ọlị. Nke a bụ mkparịta ụka halakhic na-adọrọ mmasị ma dị mgbagwoju anya, na m enweghị ndị na-ata ahụhụ ebe a, ya bụ, ụmụ mmadụ. Ihe ndị a niile bụ ihe atụ ma ọ bụ onyinyo na ogbo halakhim- ọgụgụ isi. Ihe mgbaru ọsọ agwa maka ịzụ uche, site na nke kachasị na-ezubere iji gosipụta echiche halakhic. N'ime ọmụmụ ihe anyị, anyị na-emeso ndị na-egbu ọchụ, ndị ohi, ndị na-egbu anụ, ndị ụgha, ọdachi na ndị na-adịghị mma dị iche iche ma na-atụle ihe a niile n'ụzọ magburu onwe ya. Ya mere, ụmụaka nọ na Hyderabad nwere ike ịmụta okwu ndị ebubo, n'agbanyeghị na na-esochi nzukọ dị otú ahụ n'ọnọdụ ọ bụla a ga-edu ndị mụrụ ha mgbe ha kwanyere ọdịmma ha ùgwù na ha onwe ha gaara ahapụ asụsụ ahụ n'ụjọ. Mana ngagharị a dum na-agafe anyị n'udo ma anyị anaghị egbu nkuchianaya.
Anaghị m ahụ n'okwu ndị a nke anụmanụ ya mmegide. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha na-enwe mmasị na mbiputegharị n'etiti ụgbọ elu nke mkparịta ụka (mmadụ na halakhic), ma ka o sina dị, m nụrụ n'azụ a ton nke nkatọ nke oyi nke mkparịta ụka ahụ, ya bụ nleghara anya maka akụkụ ndị siri ike nke mmadụ nke ikpe a. Gemara na-akọwa ikpe a dị ka a ga-asị na ọ bụ otu anụ nke dabara na mmiri ara ehi, ma gaa n'ihu na-atụle iwu ndị metụtara n'ọnọdụ dị otú ahụ. Ọ na-eleghara ọdachi jọgburu onwe ya nke ụmụ mmadụ mere ebe a anya kpamkpam. Ezinụlọ a mmadụ nwụnahụrụ enweghị nwunye (n’ezie otu n’ime nsogbu ndị ahụ) na nwanna ha abụọ si n’otu ezinụlọ. Kedu onye na-anọ ebe ahụ ịkwado ụmụ mgbei? (Oh, e nweghị n'ezie, ma ọ bụghị na agaraghị abụ album ebe a.) Obi onye na-agaghị akwa ákwá na ihe anya agaghị wụfuo na-anụ ihe a nile?! E kwuwerị, na ntị nke ntị chiri mkpụrụ obi anyị.
Echere m na abụ olu ụtọ m nụrụ n'okwu nke anụmanụ ya, dabere na obere akụkụ na ahụmahụ m kwa ụbọchị na beit midrash maka ụmụ akwụkwọ doctoral na Bar Ilan (na ntọala nwanyị ndị ọzọ). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla anyị bịarutere n'okwu dị otú ahụ, e nwewo nrụtụ aka ndị na-ama jijiji sitere na mmadụ na uru na karịsịa akụkụ mmetụta uche nke ọnọdụ ndị dị otú ahụ, na n'ezie nkatọ nke Gemara na ileghara ndị mmụta anya maka akụkụ ndị a. Oyi na enweghị mmasị ọ na-egosipụta bụ ihe a na-apụghị ịghọta aghọta na nke a na-apụghị ichetụ n'echiche. Anyị niile amaralarị anyị n'ịmụ okwu nke nna na-enyefe nwa ya nwanyị nke nta n'aka nwoke sie nri, nwanyị a machibidoro iwu maka nke a na nke ahụ, agunot enweghị ụzọ mgbapụ, "rapaara n'elu ikpo okwu ya" na mkparịta ụka Lithuania ndị ọzọ Talmud.
M na-ahapụ onwe m ka m kwuo site na ahụmahụ na ndị a bụ nyocha nke na-akọwapụta ọtụtụ ụmụ nwanyị (na ndị na-eso ụzọ, nke bụ otu ihe ahụ. Lee ihe atụ na ogidi ndị a. 104 na-315). Ọ baghị uru ikwu, ndị Lithuania dị ka m bụ ndị a gụpụrụ na mmetụta dị otú ahụ na BH. M ga-enye ọbụna ndị nduzi nke telenovela ndụmọdụ ụfọdụ, sị: Dị ka ihe atụ, ha ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha gbuo nwunye nke abụọ nwanna ahụ ma maa ya mma n’afọ, onye bụ́ nne Hibru nke nwa nwanne nne nwa ya nwanyị, onye n’onwe ya bụ ọkara. Ohu na ọkara free gburu Garma.Nke dị n'etiti okwu na imikpu na mikveh na atọ osisi nke mmiri pọmpụ enweghị dab nke yiri ka mpụta mmanya. Ha nwere ike ịmụta ihe n’ihe kacha mma, ya bụ, gịnịọnọdụ. Nke a gaara eme ka mkparịta ụka ahụ baa ọgaranya ma mee ka ọ na-adọrọ mmasị karị.
Nkatọ yiri nke ahụ na mpaghara ọzọ
Ọ bụghị nanị Talmud na ụmụ akwụkwọ ya ka a na-akatọ nkatọ ndị a. Na kọlụm 89 Enyere m ihe atụ nke nkatọ yiri nke a, na oge a na ọnọdụ agụmakwụkwọ-teknụzụ. M pụtara a maara nke ọma akụkọ banyere ọbara tube na Technion (nke eleghị anya ọbụna na e kere). M ga-esi ebe ahụ depụta ihe.
gwara Site n'aka Prof. Haim Hanani nke Technion, nke mere ka ule na-aga na ngalaba nke Mechanical Engineering, a gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha chepụta ọkpọkọ ga-ebu ọbara site na Eilat gaa Metula. A jụrụ ha ihe ha ga-eji mee ya, ihe dayameta na ọkpụrụkpụ kwesịrị ịbụ, kedu omimi nke ala iji lie ya na ihe ndị yiri ya. Ndị na-akọ akụkọ a (na mụ onwe m anụwo ntị na ntị m tụrụ n'anya ụfọdụ ndị omume a tụrụ n'anya n'okwu a. Ọ baghị uru ikwu na ọ tụrụ m n'anya n'ezie) na-eme mkpesa otú ụmụ akwụkwọ nkà na ụzụ Technion, bụ ndị n'ezie ogologo oge gara aga furu efu. onye na-ese foto mmadụ (n'adịghị ka PhDs na nwoke na nwanyị na akụnụba ụlọ Ha nwere ezi uche nke ọma mepere emepe, ọkachasị mgbe ha na-emepụta tube nke ga-eduga isiokwu ha ozugbo na sistemu akwụkwọ akụkọ), dozie ule ahụ wee nyefee ya n'ebughị ibu nkuchianaya na na-ajụ ihe kpatara mkpa tube ọbara dị otú ahụ. Naanị iji mee ka ihe ijuanya ahụ dịkwuo ukwuu, ọ na-ekwu na a na-ekwu na nyocha dị otú ahụ mere ka e webata ọmụmụ ihe gbasara mmadụ na usoro ọmụmụ Technion. O doro anya na ọ dị onye were nyocha a kpọrọ ihe.
Beyond ajụjụ nke uto na ọchị nke udomo oro edemede na ike N'ezie a ga-arụrịta ụka (ọ bụ ezie na n'anya m na ọ bụ nnọọ ụtọ), na critique n'onwe ya yiri ka m nnọọ nzuzu. Kedu nsogbu dị na ajụjụ dị otú ahụ?! Na onye ọ bụla na-eche na onye nkụzi ahụ bu n’obi ịhazi ogige ịta ahụhụ nakwa na ọ na-enyere ụmụ akwụkwọ ahụ aka n’idozi nsogbu nke ibuga ọbara? Ụmụ akwụkwọ ndị doziri ule ahụ kwesịrị iche na nke a bụ ọnọdụ na mkpesa? Nrụpụta na ngwọta nke ule dị otú ahụ adịghị n'ụzọ ọ bụla na-egosipụta omume rụrụ arụ, ma ọ bụ ọbụna ọkwa nke mmetụta omume nke onye nkụzi ma ọ bụ nke ụmụ akwụkwọ. Site n'ụzọ, ọbụna nkatọ a na-akwa emo adịghị egosipụta ọkwa dị elu nke mmetụta omume. Kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị a, ọ bụ ịkwụ ụtụ isi na-enweghị isi, yana ihe nzuzu, maka izi ezi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezighị ezi na mmetụta na-enweghị isi.
E wezụga ajụjụ ma ọ bụ ihe ziri ezi na ezi uche iji weta ajụjụ dị otú ahụ n'ule, m ga-achọ ịrụ ụka na ụmụ akwụkwọ ndị zutere ya ma dozie ya na-enweghị nhụsianya anya yiri nnọọ ndị ọkà mmụta halakhic ndị na-agafe ọnọdụ dị ka. nke m ji nkuanya oyi kpọnwụrụ kọwaa ya. Ọ bụ ajụjụ gbasara okwu. Ọ bụrụ na ihe ndị gbara ya gburugburu bụ halakhic ma ọ bụ nkà na ụzụ sayensị, ma o doro anya na onye ọ bụla na ọ dịghị onye nọ ebe a na-ezube igbu mmadụ ma ọ bụ buru ọbara, ọ dịghị ihe kpatara ya n'ụwa maka eriri obi ha ga-ama jijiji ma ọ bụ ṅụrịa ọṅụ n'ihi ya. Ha ka mma ịhapụ ndenye ego maka ihe omume n'ezie. Ọ bụrụ na o nwere onye eriri ya na-ama jijiji ọ dị mma n'ezie. Onye ọ bụla na usoro uche ya, na dịka anyị maara na ọ dịghị onye zuru oke. Ma ịhụ nke a dị ka àgwà nke na-egosipụta omume ọma nke onye ahụ na n'enweghị ịma jijiji bụ ihe na-egosi omume ọma a na-adịghị mma na kasị njọ njakịrị.
"Ice nke nwere ọgụgụ isi, gịnị ka ọ hụrụ ka ihe efu?"
Otu nwekwara ike icheta midrash nke akụkọ mgbe ochie nke Korach Zatzokal bụ onye mere mkpesa banyere Moshe Rabbeinu (Ezigbo onye na-achọ, Abụ Ọma a):
“N’oche Zim” ka ice dị, bụ́ nke na-akwa emo banyere Mozis na Erọn
Kedu ihe ice mere? Ọgbakọ ahụ dum gbakọtara, e wee sị: “Ka ọgbakọ dum chikọtara ha ice,” o wee malite ịgwa ha okwu ọjọọ, sị ha: “Otu nwanyị di ya nwụrụ nọ n’ógbè m ma e nwere ụmụ agbọghọ abụọ na-enweghị nne na nna. o we nwe otù ubi. O we bia igwu ala-osisi, Moses we si ya, Agwula ehi na inyinya-ibu n'otù. Ọ bịara ịgha mkpụrụ - ọ gwara ya: " Ara gị agaghị agha ngwakọ." Ọbịara iwe ihe ubi na ikpo obo, ọ sịrị ya: Tinye mkpokọta nchefu na wig. O we bia ime ntọ-ala, Ọ si ya, Nye onyinye na otù uzọ n'uzọ iri nke-uzọ na otù uzọ n'uzọ iri nke-abua. Gosipụta ahịrịokwu ahụ n’ebe ọ nọ ma nye ya ya.
Gịnị ka ogbenye a mere? guzoro ree ubi wee zụta atụrụ abụọ ka ha ga-eyi uwe elu ha na-ekpori ndụ ehi ha. Ebe ọ bu na amuru ha- Eron we bia, si ya: Nyem ọkpara, Chineke we sim: “Onye ọ bula nke amuru n’ìgwè ewu na aturu-gi na n’ìgwè ewu na aturu-gi, rara Jehova, bú Chineke-gi, nye. Gosikwara ya ikpe ziri ezi wee mụọ ya. Oge eruola ka ajị ajị na ajị ha—Erọn wee bịa sị ya: Nye m mmanụ mbụ nke gas ahụ nke bụ́ ihe Chineke kwuru:
Ọ si, Enweghịm ike iguzogide nwoke a, n'ihi na m'gāb͕u ha, rie ha. O we b͕ue ha, Eron we bia, si ya, Nyem ogwe-aka na ǹtì na afọ. Ọ sịrị: Ọbụlagodi mgbe m gbuchara ha, ewepụghị m ya - ha bụ nwa nwoke! Eron we si ya, Ọ buru na otú a ka ọ bu nkem, otú a ka Chineke siri: “Ime-nb͕ochi ọ bula nke Israel gābu nke gi. Natlan wee gakwuru ya wee pụọ na-akwa ákwá ya na ụmụ ya nwanyị abụọ.
Otú ahụ ka o si banye ná nhụsianya a! Ya mere, ha na-eme ma kwụgidere na Gd!
N'ezie na-agbawa obi, ọ́ bụghị ya? Ọ bụ ntakịrị ihe na-echetara nyocha m kọwara n'elu, n'agbanyeghị na enwere ihe dị iche ebe a. Nkatọ ice nwere ya n'ezie na ya. Ọ nwere ike were ihe dị n'ọnọdụ ya wee chepụta akụkọ na-agbawa obi, mana ọ bụ ezie na akụkọ dị otú ahụ nwere ike ime n'ụkpụrụ, na nke ahụ bụ n'ezie ntụziaka halakhic maka ọnọdụ dị otú ahụ. Ọ bụ ya mere e ji nwee ihe ịma aka ebe a maka omume halakhah, nke a bụkwa nkwupụta siri ike. Akpọrọ m gị aha ọtụtụ oge mbụ Israel egwuri egwu, Ọkà mmụta ọgwụ si Jerusalem, bụ́ onye na-akọbu akụkọ banyere adịghị ike nke halakah na okpukpe, na-akpalite ọgba aghara. Okpukpe ahụ na-eku ume ume mgbe ọ bịara doo anya na akụkọ dị otú ahụ abụghị na e keghị ya, ma m na-echekarị ihe mere o ji dị mkpa. N'ezie halachah na-amachibido ohere nke Shabbat iji chekwaa ndụ nke ndị mba ọzọ. N'ezie, iwu chọrọ ka di ya dina nwunye Cohen n'ike. Ya mere ọ bụrụgodị na o meghị n'ezie, ọ bụ nkatọ ziri ezi.
N'echiche a, nkatọ Shachak na Korach dị nnọọ ka nkatọ anyị hụrụ n'elu na-emeso a hypothetical ikpe na nnọọ ezi uche equanimity kwupụta ya. O nweghị ihe jikọrọ ya na ọkwa omume nke ndị mmadụ ma ọ bụ nke halakhah.
Ka anyị lekwasị anya na nsogbu na nyocha nke tube ọbara ma ọ bụ telenovela na ogbo. Nke a bụ okwu echiche na-emeghị n'ezie. N'ịbụ ndị chere ụdị ikpe dị otú ahụ ihu, echere m na anyị agaghị anọgide na-enwe mmasị na ya. A na-emepụta enweghị mmasị n'ebe a n'ihi ọdịdị echiche nke okwu ahụ nke doro anya na ndị niile metụtara ya, na n'ihi ọnọdụ nke mkparịta ụka ahụ. Nkọwa okwu ikpe ndị a na-ebilite bụ ọgụgụ isi-ọkachamara. A na-akọwa ajụjụ dị na injinịa n'ọnọdụ ya dị ka ihe ịma aka mgbako-nkà na ụzụ, na n'ụzọ ziri ezi na ọ dịghị onye na-echegbu onwe ya maka nzube nke ngụkọta oge (n'ihi na o doro onye ọ bụla anya na ọ dịghị ihe dị otú ahụ. N'ezie, e nwere, nwalee nke nwa akwụkwọ. ikike). Otú ahụ ka ọ dịkwa telenovela na ogbo. O doro anya na ihe niile na nke a bụ okwu ntule e mere iji mee ka nghọta halak dị nkọ. Imeso okwu a na-eche n'echiche dị ka à ga-asị na ọ na-eme n'ezie bụ ihe omume ụmụaka, ọ́ bụghị ya? Ụmụntakịrị na-ewere akụkọ ahụ dị ka à ga-asị na ọ bụ eziokwu. Ndị okenye kwesịrị ịghọta na nke a abụghị ikpe. N'uche nke m, nke a yiri ajụjụ gbasara ikpe Talmudic dị ka Gamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX na Yevamot Katz XNUMX: XNUMX), ma ọ bụ Hittin nke gbadara n'oké ọhịa (Minchot Set XNUMX: XNUMX), onye na-eche ka ụdị ikpe ahụ ga-esi. mee. Mgbe ị na-aṅa ntị n'ihe ndị gbara ya gburugburu, ọ ga-edo anya na ọ dịghị onye na-ekwu na nke a bụ ikpe ma ọ bụ na ọ nwere ike ime. Ndị a bụ okwu echiche nke e bu n'obi imezi ụkpụrụ halakhic, dị ka okwu ụlọ nyocha na nyocha sayensị (lee.Akụkọ Na Okimas).
Na nkenke, nsogbu dị na nyocha ndị a bụ na ha na-eche na mmadụ kwesịrị ka ọ na-emeso okwu echiche nke na-abịa n'ihu ya dị ka a ga-asị na e nwere ihe omume n'ezie ebe a. Ị nwere ike ịnye ihe atụ sitere na fim ma ọ bụ akwụkwọ na-akọwa ọnọdụ ndị dị otú ahụ. Rịba ama onye na-agaghị eji Bible ma ọ bụ ịhụ ọnọdụ dị otú ahụ kpọrọ ihe. Kedu ka o si dị iche? A sị ka e kwuwe, na fim ma ọ bụ akwụkwọ, anyị kwesịrị inwe mmetụta dị otú ahụ ma banye n'ọnọdụ. Azịza nye nke a bụ n'uche nke m: 1. Aha nke gbara ya gburugburu bụ nka, nke pụtara na onye na-azụ ahịa (onye na-ekiri ma ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ) kwesịrị ịnwale ma tinye ọnọdụ ahụ ma nweta ya. Nke a bụ isi ihe mgbapụ nka nka. Mana ọ dịghị adị na ngalaba mmụta mmụta ma ọ bụ teknụzụ-ọkwa mmụta. 2. Ọbụlagodi na ọ bụ ihe okike na mmegharị uche dị otú ahụ na-eme na ụmụ nwoke (ma ọ bụ ụmụ nwanyị), ọ nweghị uru ọ bara. Ọ bụrụ na nke ahụ emee - mgbe ahụ ọ dị mma (ọ dịghị onye zuru oke, cheta). Mana nkwupụta sitere n'aka ndị mmadụ n'aha ụkpụrụ omume na ọ ga-emerịrị ha bụ nzọrọ dị iche kpamkpam. Ịhụ onye na-enweghị nke a dị ka ntụpọ omume bụ n'ezie ihe efu n'anya m.
Ezigbo ikpe: mkpa nke nkwụsị
M rụrụ ụka na itinye uche n'ihe gbasara echiche bụ ihe ụmụaka kacha mma. Mana gafere nke ahụ, ọ ga-amasị m ịrụ ụka ugbu a na ọ nwekwara akụkụ na-emerụ ahụ na ya. Mgbe nkatọ ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu nke ụmụ akwụkwọ doctoral bilitere, agbalịrị m ịkụnye n'ime ha ugboro ugboro mkpa mmetụta uche na nke uche dị na ọnọdụ ahụ mgbe a na-eme ihe gbasara agụmakwụkwọ halakhic. Ọ bụghị naanị na itinye aka na mmetụta mmetụta uche dị otú ahụ enweghị uru, mana ọ na-emerụ ahụ n'ezie. Ntinye aka nke uche na nke mmetụta uche nwere ike bute nkwubi okwu halakhic (na teknụzụ) na-ezighi ezi. Onye ikpe nke na-ekpebi ikpe ahụ n'ihi mmetụta ya bụ onye ikpe ọjọọ (n'ezie, ọ naghị achị ma ọlị. Naanị tie mkpu).
Rịba ama na ebe a ka m na-ekwu maka okwu mmadụ n'ezie nke na-abịa n'ihu m, ọ bụghị naanị okwu echiche. Ọ bụrụ na m ga-ahụ ikpe nke otu nwanna nwoke na nwanne nwanyị ndị lara n'iyi ọnụ na a jọgburu onwe ọdachi, ọ bụ a n'ezie ikpe mere n'ezie, n'ihi ya, n'ọnọdụ dị otú ahụ a ga-enwe uru na uche n'ebe akụkụ mmadụ na ya. N'ebe a, enwere uru na mkpa n'ịgwọ okwu a na ọkwa niile n'otu oge: ọgụgụ isi-halakhic, ọgụgụ isi-omume na mmadụ-ahụmahụ. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọbụlagodi n'eziokwu, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ọkwa mbụ iji lekwasị anya na ụgbọ elu mbụ ma kewaa abụọ ndị ọzọ. Onye na-ekpe ikpe kwesịrị iche echiche nke ọma banyere ikpe na-abịa n'ihu ya. Ihe halakhah na-ekwu enweghị ihe jikọrọ ya na ihe mmetụta uche na-ekwu (na n'uche m ọ bụghị ọbụna ihe omume na-ekwu), na ọ dị mma na ọ na-eme. Onye na-ekpe ikpe kwesịrị iji nwayọ gbupụ iwu ahụ, wee si otú a nwee ikike iduzi eziokwu nke Torah. Na ogbo mgbe nyocha nke halakhic oyi gasịrị, enwere ohere ịbanye n'uche n'ime ọnọdụ ahụ na akụkụ omume ya na nke mmadụ, na iji nyochaa ya n'echiche ndị a. Nke a pụtara na mgbe nyocha halak nke mbụ na-ebuli ọtụtụ nhọrọ ndị nwere ike ime, onye nwere ike ịtụle mmetụta uche na akụkụ nke mmadụ na nke omume iji kpebie n'etiti ha ma họrọ ikpe ziri ezi. Mmetụta mmetụta ekwesịghị isonye na nyocha ezi uche dị na ya, ma na-abịa mgbe ọ gasịrị. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ uru na ịkekọrịta na ọmịiko n'ezie na nhụjuanya nke onye ahụ nọ n'ihu gị, ọ bụrụgodị na ọ nweghị ihe ọ pụtara. Mana ihe niile a ga-ewererịrị na ụgbọ elu ndị yiri ya, ma ọkacha mma ga-abụ mbubreyo na mkpebi halak nke mbụ. Ntinye mmetụta mmetụta uche na ikpe ahụ abụghị ihe a na-achọsi ike ma ọlị.
Agaghị m alaghachi ebe a n'ụzọ zuru ezu na nkwupụta ọzọ m merela ọtụtụ oge (lee dịka ọmụmaatụ na kọlụm 22, Na na usoro nke ogidi 311-315), Na omume enweghị ihe jikọrọ ya na mmetụta uche na ihe ọ bụla. Omume bụ ọgụgụ isi karịa ihe mmetụta uche. Mgbe ụfọdụ mmetụta uche bụ ihe na-egosi ụkpụrụ omume (mmetụta ọmịiko), ma ọ bụ ihe na-egosi nsogbu dị ukwuu, ọ dịkwa mkpa ịkpachara anya ịkatọ ya ma ghara ịgbaso ya. Na-asọpụrụ ya ma na-enyo ya enyo. Na njedebe nke ụbọchị, ekwesịrị ime mkpebi n'isi ọ bụghị n'ime obi, mana isi kwesịkwara iburu n'uche ihe obi na-ekwu. Esemokwu m bụ na njirimara n'echiche nke mmetụta mmetụta enweghị uru ọ pụtara. Nke a bụ àgwà mmadụ, ma dị ka nke a bụ eziokwu. Ma ọ nweghị uru ọ bara, ndị na-enyeghị ya ekwesịghị ichegbu onwe ya banyere ọnọdụ omume na uru ya.
N'iburu nke a, m na-arụ ụka na ọbụna na ọkwa nke abụọ, mgbe nyocha mbụ nke halakhic gasịrị, ọ dịghị ebe dị mkpa maka mmetụta uche. Maka omume omume ma eleghị anya ee, ma ọ bụghị maka mmetụta uche (kwa otu. Ma eleghị anya dị ka ihe ngosi na na). N'ụzọ megidere nke ahụ, itinye aka n'ụzọ mmetụta uche bụ ndenye nnwale maka aghụghọ na-ezighi ezi na mgbagha nke echiche, na maka ime mkpebi na-ezighi ezi.
Nkwubi okwu sitere na ihe a nile bụ na mgbe ị na-amụ okwu Halakhim Talmudic ọ dịghị uru ọ bara na itinye aka na mmetụta uche, na mmadụ kwesịrị ọbụna ịgbalị imeri mmegharị uche dị otú ahụ ọ bụrụgodị na ọ dị (m na-ekwu maka ndị na-enwebeghị ike imeri. ya wee mara ya). Na ikpe halak nke bara uru (ntụgharị mkpebi na otu ikpe na-abịa n'ihu anyị), ebe mmetụta uche na omume kwesịrị kwụsịtụrụ, na ikekwe nyere ụfọdụ ebe na nke abụọ ogbo (karịsịa omume ọma. Iji mmetụta na-erughị).
Enwere arụmụka na ọkwa ngwá ọrụ na onye na-eme adịghị emeso mmadụ ihe n'echiche n'echiche dị otú ahụ agaghị eme otu ihe ahụ n'ihe gbasara ikpe ndị dị adị. Ana m enwe obi abụọ nke ukwuu. Ọ dị m ka okwu dị mma maka ngọzi asaa, ọ dịghịkwa ihe m na-ahụ maka izi ezi ya. Ka o sina dị, onye ọ bụla nke na-ekwu nke a kwesịrị iweta ihe akaebe n'okwu ya.
Enwere ike ikwu otu ihe ahụ gbasara omume ndị omenkà. Gemara na-ekwu na onye na-ese ihe, dọkịta ma ọ bụ onye na-emeso ụmụ nwanyị, "na ịgba ohu ya na-amaja", ya mere kwere ya ihe ndị a machibidoro ndị ikom ndị ọzọ (singularity ma ọ bụ kọntaktị na nwanyị na ihe ndị yiri ya). N'ịbụ onye na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ọkachamara ya na-eme ka mmetụta uche ya kwụsị ma gbochie mmejọ na echiche ndị a machibidoro iwu. Amaghị m ma ọ bụrụ na mmekọahụ nke ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị na-ada mbà n'ihi ya, ọbụna mgbe ọ na-ezute nwanyị na-enwe mmekọahụ na nke na-adịghị mma. Enwere m obi abụọ na nke a bụ ọnọdụ dị iche, mana ọ chọrọ nyocha. Ndị mmadụ maara ka e si eme nkewa na nkwụsịtụ, na n'echiche a Dayan na-amụtakwa na Abidathiyahu Tridi. Mgbe mmadụ na-arụ ọrụ ya ọ maara ka ọ ga-esi wepụ mmetụta uche ya, nke ahụ apụtaghị na ọ na-esiwanye ike n'akụkụ ndị ọzọ. N'ezie, onye na-ese ihe nke na-etinye uche na nkà ya bụ ọnọdụ dị anya karịa ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu na ọmụmụ halakhic, ebe ọ bụ na onye na-ese ihe ndị a bụ ụmụ nwanyị na ọnọdụ ndị dị adị, ebe maka onye ọkà mmụta ihe ndị a bụ echiche efu. Ya mere, ọ bụrụgodị na anyị achọpụta na mmetụta nke onye na-ese ihe na-ebelata, nke a apụtaghị na nke a bụ ihe na-eme n'ime ọkà mmụta ahụ. Ikekwe, ọ dị ka ọkàikpe nke na-ewepụ mmetụta ya, ebe ọ bụ na ọkàikpe na-ekpe ikpe n'ezie ma na-eme ya n'ọnọdụ ọkachamara. N'ebe ahụ, a pụrụ ikwu na nkà ya na-enwe nsogbu.
A pụrụ ịrụ ụka na onye mmụta nke zutere ọnọdụ ndị dị otú ahụ ma ghara ịkpali ya mmetụta ndị dị mkpa n'ime ya adịghị abanye n'ọnọdụ ahụ nke ọma. Nke a bụ arụmụka megide ya na ọkwa agụmakwụkwọ, ọ bụghị na ọkwa omume. Ihe a na-ekwu bụ na ọ na-amụta ihe na-adịghị mma ọ bụghị na ọ bụ onye na-akwa iko. Echeghị m na ọ bụ otú ahụ. Mmadụ nwere ike ịbanye n'ọnọdụ n'agụmakwụkwọ ọ bụrụgodị na ọ nọghị na ya n'usoro mmadụ. Arụmụka m, n'ezie, bụ ọnọdụ na nghọta nke halakhah dị ka ọrụ ọkachamara-ọrụ nke na-adịghị agụnye ụgbọ elu mmetụta uche (ma e wezụga na ọkwa nke abụọ, wdg). Agbanyeghị, ntụpọ omume m na-ahụghị ebe a.
 Ejighị n'aka na ọ nwere ihe jikọrọ ya na agwa nwanyị. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọhụrụ nke ihe ọhụrụ, ebe ọ bụ na ụmụ nwanyị anaghị emekarị ihe ndị a kemgbe ọ bụ nwata.
 Nsonaazụ n'onwe ya bụ nnabata n'uche m. O doro anya na ọ bụghị ihe ọjọọ maka ụmụ akwụkwọ nọ na Technion ịmụ ụfọdụ ụmụ mmadụ. Mana ọ nweghị njikọ dị n'etiti nke a na ikpe nke arịa ọbara. Ikpe ahụ egosighi nsogbu ọ bụla dị mkpa ka edozi ya, ma ọ bụrụ na enwere nsogbu dị otú ahụ, ọmụmụ mmadụ agaghị enye aka n'ụzọ ọ bụla na ngwọta ya.
 Rashi na Desert XNUMX, p.
Azịza nye ndị zuru oke na Chineke
Azịza nye obodo ndị Juu
Azịza na-adịghị ekwu banyere ụwa na-apụghị refuted
Echiche 45 na "Uche na Obi - Mmetụta dị na Ọmụmụ na Ikpe nke Halacha (Column 467)"
T. Benisan 10 - 04/2022/01 na 56:XNUMX
A katọrọ okwu halak nke a kpọtụrụ aha n’ebe a n’ezie, ọ bụrụ na m cheta nke ọma, mgbe e gbusịrị ndị òtù ezinụlọ Maklef na Motza n’oge ihe omume nke XNUMX.
Iri na abụọ nke Nissan 13 - 04/2022/14 na 39:XNUMX
Ndo m ezighi ezi, na-ekwu maka igbu ọchụ nke ezinụlọ Unger na Safed, otu n'ime azịza na Ahiezer HG Lag.
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/14 na 53:XNUMX
Kedu ka ị ga-esi chọta azịza ya? Ọ ga-amasị m ịhụ isi iyi. Daalụ.
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/17 na 23:XNUMX
Aga m achịkọta nkenke ihe ekwuru ebe ahụ.
A. Ikpe nke pụtara na kọlụm:
[Otu nwoke lụrụ nwa nwanne ya na nwunye ọzọ. Ọ bụrụ na ọ nwụrụ mgbe nwanne ya nwoke nwere ike na-ebi ndụ na nwa nwanne ya (pubic) ya mere ya na nwaanyị ọzọ nọ ná mkpa bụ agụpụ si ite ime na bail (machibidoro ime ime). Ọ bụrụ na ada nwa nwanne ya anwụọ tupu di ya ma di ya anwụọ, mgbe ahụ n’oge ọ nwụrụ, ihere adịghị eme nwaanyị nke ọzọ n’ihi ya, ọ chọkwara nwa.]
Mkpebi ikpe dị na Gemara bụ ma ọ bụrụ na mmadụ amaghị onye mbụ nwụrụ, ma di ahụ eburu ụzọ nwụọ na nwunye ya (nwa nwanne ya) ka dị ndụ ma nwunye nke ọzọ nwụrụ n'ihe arụ, ma ọ bụ nwunye mbụ wee nwụọ, nwunye nke ọzọ ji nwa. [Ma iwu bụ n'ihi na enwere obi abụọ ma ọ bụ iwu na Bibom ma ọ bụ amachibidoro na Bibom mgbe ahụ uwe elu ma ọ bụghị Bibum].
B. Okwu dị na Ahiezer:
[Nwoke nwuru ma n'oge ọnwu ya hapụrụ sperm ma ọ bụ nwa ebu n'afọ nke nwunye ya bụ nke apụrụ n'ihe arụ. Ma ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa ma ọ bụ onye ọ bụla anwụọ tupu ya anwụọ, nwunye ya aghaghị ibibom. Ọ bụrụ na ọ nwụọ, hapụ nwa e bu n’afọ mgbe ọ nwụsịrị, ọ bụrụkwa na ọ dị ndụ nanị otu awa wee nwụọ, ma ọ bụ hapụ nwa nwoke na-anwụ anwụ, ọ bụ mkpụrụ maka ihe niile, nwunye ya ewee ghara ime ihe arụ.]
Onye ikpe na Ahieza bụ nna nwụrụ na n'oge ọnwụ ya hapụrụ anụ anụ nke nwụrụ otu ụbọchị mgbe nna ya gasịrị, ma a na-ewere nwa anụ anụ dị ka mkpụrụ maka ihe ọ bụla dị ka ịnwụ anwụ na nwanyị ahụ nwụrụ anwụ bụ ihe arụ, ma ọ bụ anụ anụ (onye nwere ike ịnwụ n'ime ọnwa iri na abụọ). [Rose Garden na-eche na anụrị anaghị ewere dị ndụ ma ọ dị njọ karịa ịnwụ na nwanyị ahụ nwụrụ anwụ ga-abụrịrị bibom. Ahiezer gosipụtara site na mgbakwunye na a chụrụ Ben Tripa na Maybum]
Enwere myirịta na ndị ezinaụlọ abụọ nwụrụ n'ime obere oge (n'ihi otu ihe ahụ).
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/17 na 27:XNUMX
Nke a abụrụla ibe taa 🙂
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/19 na 06:XNUMX
Echere m na Nadav na-ezo aka na azịza Ahiezer nye HG n'etiti CJ:
N'ọnwa Adar XNUMX (c) na ajụjụ nke Darg onye n'oge igbu ọchụ na Iraq nna e gburu na mgbe ahụ nwa nwoke dị ndụ otu ụbọchị, onye ogbu mmadụ mma na punctured ngụgụ, ma ọ bụrụ na ekwe ka. ịlụ di na nwunye na-enweghị mmịpụta, dị ka Ginat Vardim responsa Sephardi e wetara na ikpere Josef na Harka'a na Petah Tikva, nke nwere ike ịka njọ.
N'ebe a, ahụrụ m na Ginat Vardim responsa na ahụghị m ihe àmà ọ bụla n'ebe ahụ iji mee ka ọ dị ọhụrụ, naanị site na onye okpukpe na Matanitin na-anwụ anwụ na-eduzi ma ọ bụghị site na Tani Prefa, nke pụtara na Detrapa adịghị achụpụ. Agbanyeghị, site na Toss D. Na maka Toss, ọ dị ka ọ na-anwụ site na otu nwoke kọwara na Sanhedrin site na Dalarbanan Darbav Hoy dị ka anụ oriri, ya mere Maimonides na PB sitere na onye gburu Dahurgo adịghị egbu ya dị ka anụ oriri, na Demprashhim GC ọzọ. Da'af onye a tụrụ atụ na ọ na-anwụ. Ma o doro anya na ụlọ nke Hari Batos Yavmot, ebe Demguide nọ n'ebe na-enweghị njedebe nke ndụ, na na B.H. A.H. A sị ka e kwuwe, a na-egosipụta ya site n'okwu nke Toss, ihe nlereanya nke na-anwụ anwụ na-eduzi onye dị ka anụ ọhịa, ya mere na mwakpo na Kor'an David, nke na-agbakwunyere na S. Ikpe anyị. echekwala ihe ọ tụfuru, n'ihi na ndị na-anwụ anwụ na ndị na-eduzi chọrọ bib ma na-achụpụ ya site na bib. N'ozuzu, ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụrụ na nwa nwa na-eche na ọ ga-adị mkpa ka a napụta ya, na a ga-enwekwa ime ime n'ime nwunye nwanne nwoke nwere nwa nwoke a tụfuru na ebe ọ bụ na o wetara okwu nke ndị ahụ. Toss Reid na Shabbat KK ekwesịghị inwe mmetụta ọ bụla n'ihi obi abụọ na-enwe obi abụọ, ọ dịghịkwa mkpa ka a napụta ya ma hapụ ya ka ọ lụọ. + Shum na nzaghachi nke Beit Yizchak, Chiv. Na A.A. na Beit Yitzchak responsa Kha.
Mana nke a abụghị ikpe anyị. Ọ bụ ezie na otu onye nwere ike masịrị ya site na ụzọ ọgwụgwọ na enweghị nkọwa zuru oke na akụkụ mmetụta uche.
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/19 na 31:XNUMX
[N'ihe banyere njedebe nke okwu gị banyere ụzọ e si emeso ya, ịgagharị na Treasure of Wisdom na-ekpughe na onye jụrụ Ahiezer bụ Rabbi Zvi Pesach Frank bụ onye rabaị nke Safed jụrụ banyere ya ebe ihe ahụ merenụ, na ha enweelarị ya. kwuputara ujo, wdg.
Maka obere oge m chere na ọ nwere ike ịdị ka akụkọ ụbọchị nke onye ụkọchukwu gburu enyi ya n'ebulu ahụ, na mgbakwunye na nna ya na-atụgharị na-ekwurịta banyere kosherness nke mma, nke e dere akụkọ na okwuchukwu banyere ya, ma. ọ dịghị otú ahụ ma ọlị n'ihi na ọ bụ igbu ọchụ nke ndị iro.
N'etiti azịza halakhic na okwuchukwu eulogy
Nke iri na atọ nke Nisan 13 - 04/2022/23 na 57:XNUMX
Na XNUMX nke Nisan XNUMX (Rabbi Yosef Caro's)
Mkparịta ụka dum nke mmetụta ma ọ bụ enweghị mmetụta nke ndị na-ekpe ikpe nke Halacha na-adabere na nhazi ha na azịza ha - adịghị mkpa. Ndị amamihe ahụ gosipụtara obi ụtọ ha na mmemme ịkpọ oku n’okwuchukwu ha n’obodo, bụ nke e bu n’obi kpalie ndị na-ege ntị. Na azịza halakhic mkparịta ụka ahụ bụ halakihi 'akọrọ'. Na-achị iche na-achọrọ iche.
Ọ dị mma ịmara na ọ bụ naanị ole na ole n’ime ọrụ ndị amamihe nke Izrel ka e bipụtara, otu akụkụ n’ihi ego e ji ebi akwụkwọ. Ya mere, gbalịa ibipụta nhọrọ nke nwere ihe ọhụrụ dị ịrịba ama. Ma ọ bụ ihe ọhụrụ na halakhah ma ọ bụ ihe ọhụrụ na akụkọ ifo. Igosipụta mmetụta nke ọṅụ maka ozi ọma na mwute maka asịrị ọjọọ - ọ dịghị ihe ọhụrụ, onye ọ bụla na-eche ya, ọ dịghịkwa mkpa ịgbatị ya mgbe ị na-agbakwụnye akwụkwọ. Ọbụlagodi na ihe ọhụrụ ha bipụtara ntakịrị nke ntakịrị.
Daalụ, obere nwa ahụ.
Ndozi na ikwu okwu
Nke iri na atọ nke Nisan 14 - 04/2022/00 na 06:XNUMX
Paragraf nke 1, ahịrị 1
… Dabere n'okwu ha…
Okwesiri iburu n'uche na mgbe ufodu ncheghari na-adi ogologo n'okwu iru uju, mgbe a manyere mmadu ime ochichi ike. Mgbe onye na-ekpe ikpe na-eche na n'agbanyeghị oke ọchịchọ ya na ọ nweghị ike ịzọpụta - mgbe ahụ ọ ga-egosipụtakwa mwute ya na ikpe ya mgbe ụfọdụ.
Dị ka ihe atụ, Rabbi Chaim Kanievsky ji okwu ole na ole gwa ọnọdụ ya ná nkenke, ma Rabbi Menachem Burstein kwuru na e nwere ikpe ndị Rabbi Kanievsky kwuru, sị: ‘Oh, oh, oh. Enweghị m ike ikwe ka '.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 na 25:XNUMX
Ihe yiri nke ahụ bụ mgbe otu ihe na-ezighị ezi jụrụ Rosh Yeshiva ka ha na-eme ihe banyere PP n'emeghị ka ha nwee agụụ mmekọahụ. Ọ zaghachiri na ụmụ akwụkwọ anaghị emetụta eziokwu, kama na ụkpụrụ halak nke gbasara ya.
N'ezie nzaghachi dị ịtụnanya, n'ihi na nkọwa dị na Mishnah abụghị "omume nke dị".
Ma n'ihe na-erughị nke ahụ, Shlomi Emuni Yisrael, nke ndị ọkà mmụta na-amụ ihe na-eduzi, na-agbakọta iji nyere ezinụlọ aka.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 na 27:XNUMX
Okwu ndị a dị ka "nnwale okuku" maka ụgbọ ala, iji nwalee iguzogide ọnọdụ dị oke egwu. Ọ bụghị na anyị ji n'aka na ụgbọ ala ọ bụla ga-agafe ihe dị otú ahụ n'okporo ụzọ
T. Benisan 10 - 04/2022/08 na 29:XNUMX
A. Nyocha gị kpamkpam na-efunahụ ọchị na nkwupụta m (na doc: telenovela! N'ime ọmarịcha nchekwa data nke scripts nyere site na nkwekọrịta ahụ, ị ​​nwere ike dee ihe ọzọ.).
B. Ma m na ụmụ akwụkwọ doctoral gị (ndị na-adịghị n'ime isiokwu maka akwụkwọ akụkọ-sayensị-akwa ụta, ma ọ bụ na ha na-amụ na Department of Macrame na Home Economics. Ònye kwuru ịhụ ihe onwunwe n'anya na chauvinism ma ghara ịnakwere ya?) Ghọta nke ọma okpukpu abụọ. . Dị ka e kwuru, ọ na-atọkwa ụfọdụ n’ime anyị ụtọ. N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị na-ezute ụdị gemara dị otú a maka oge mbụ, ọ dịkwa m ka onye mmụta nke maara nke ọma na nke nkịtị nwere ike irite uru na anya anyị tụrụ anya na ọhụụ ọhụrụ ("ndị mba ọzọ") kpọmkwem n'ihi na ọ bụ primordial na-amaghị ama na. anya nkịtị. Ikike ahụike nke ile ihe ọhụrụ dị mkpa nye onye ọ bụla. Atụla egwu, ndị ọkà mmụta ka mma na ndị ikpe (ọ bụghị transgender) esiwo na ya pụta.
nke atọ. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta dayan na ọkàikpe ekwesịghị ịka mmiri nke ukwuu ma wepụ ùkwù anụ ahụ mgbe ha na-amụ ihe, kama na-egosipụta ọgụgụ isi na ikike nke ntinye na mmụta. Ana m ekwu (na-ekwu) maka ọdịdị ihu abụọ na ahụike. Ee, ọbụna nkpuchi na-arụ ọrụ. Ọ bụghị naanị anya mmiri.
D. Ọ̀ bughi kwa onye-nchu-àjà, ọ̀ bughi onye-nlekọta ulo? Gaanụ mụta otú ikpe ndị ikpe Ụlọikpe Kasị Elu si yie nke ahụ, n’ihi ọnọdụ ha, na-eleba anya n’okwu ndị dị mkpa bụ́ ndị na-emetụtakwa ọdachi n’ụdị ma ọ bụ ọzọ mgbe ụfọdụ. Nyocha nke iwu ga-adị n'ebe ahụ n'ịdị nkọ ya niile, na-enweghị nhụsianya n'ịdị nkọ nke mkparịta ụka ahụ, a ga-enwe mgbe niile okwu mmeghe dị mkpirikpi ma ọ bụ okwu ndị na-eso ya ga-emetụta uru na akụkụ omume.
Chineke. Ajụjụ banyere osimiri nke ọbara na ọkpọkọ bụ ezigbo ihe atụ nke ọchị ọjọọ. Ọ na-emetụ aka na arụmụka mgbe nile nke dị ebe a, banyere nlelị na enweghị mkpa maka ọnọdụ, ikuku na agụmakwụkwọ.
T. Benisan 10 - 04/2022/09 na 31:XNUMX
Ndewo anụmanụ ya.
A. Agbagharaghị m n'ezie. N'ụzọ megidere nke ahụ, edere m banyere mmasị na mmasị nke nsụgharị ahụ ma ghọta ihe ọchị ahụ nke ọma. Ma site na shit m ghọtara na e nwere ụda nkatọ, na n'ezie m bụ eziokwu. Okwu gị n'ebe a kwuru nke a nke ọma. Ngụkọta gemara adịghị agụnye mmeghe uri nke ụdị Cheshin.
B. N'ezie ọ bụ echiche nke nwere ike irite uru na ya, mana ọ naghị enwetakarị uru na ọkwa halakhic. Ekwuru m nke a na njedebe nke kọlụm. M na-elekwasị anya na nkatọ omume na-adịghị mkpa.
nke atọ. Achọpụtara m na ọ bụ anya abụọ, m wee lebara ya anya. Ajụjụ m na-eche banyere ya bụ ma enweghị ụgbọ elu nke abụọ n'ihe gbasara okwu echiche kwesịrị ịbụ nchegbu ma ọ bụ na ọ bụghị.
D. Ndị ọka ikpe nke Ụlọikpe Kasị Elu, n'adịghị ka ndị na-ekpe ikpe, na-eche banyere iwu na ọ bụghị halakhah. N'ime iwu nwere ibu karịa na halakhah (ọ bụghị mgbe niile n'ụzọ ziri ezi) na mmetụta ha. E wezụga nke ahụ, ikike Halachic na-ekwu banyere ikpe ndị bara uru, Gemara adịghị. N'okwu m ka m guzoro maka nkewa a.
Chineke. Ekwuru m nkatọ nke ọchị ọjọọ ahụ, wee kwuo hoo haa na nke a abụghị ihe m na-eme. Ajụjụ m nọ na-eche bụ ma ọ dị ohere maka nkatọ omume.
N'ikpeazụ, ebubo nke substantivity na chauvinism bụ ihe a na-ahụkarị na ọ dịghị mkpa (a na-ejikarị ya eme ihe mgbe arụmụka ndị dị mkpa kwụsịrị). Mgbe m na-akọ banyere ahụmahụ m, m na-ekwu maka eziokwu. Ọ bụrụ na nsonaazụ ya bụ isi, mgbe ahụ enwere ike ịbụ eziokwu. Ụzọ a ga-esi mee nke a abụghị ịgọnarị ihe ọ rụpụtara ma ọ bụ ịta isi ihe, kama ịrụ ụka n'ụzọ ezi uche dị na ya na nke bụ eziokwu abụghị eziokwu. Ọ bụrụ na i bu n’obi ime otú ahụ, ahụghị m okwu gị n’esemokwu dị otú ahụ. Otu n'ime ihe ọjọọ ọjọọ nke ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị ike (ụmụ nwanyị nọ n'ọnọdụ a bụ n'ezie ndị na-adịghị ike, ọ bụghị mgbe niile ka ha na-ata ụta. N'ebe a, m dị njikere ịnakwere nkebi ahịrịokwu ahụ na-asọ oyi "na-adịghị ike"), bụ mkpesa na nkọwa eziokwu kama imekọ ihe ọnụ. eziokwu. Edere m ya gbasara agụmakwụkwọ ụmụ nwanyị na mbụ, na ọtụtụ ụmụ nwanyị gụrụ ya were iwe kama ịbịaru nkwubi okwu achọrọ na ịgbalị imeziwanye. Ọ bụ ndenye ọgwụ iji cheta ọnọdụ ahụ (ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mma, mgbe ahụ, ncheta abụghị ihe ọjọọ n'anya gị n'ezie, mana ahụghị m ihe a na-ebo m ebubo).
T. Benisan 10 - 04/2022/10 na 05:XNUMX
Nkatọ m abụghị nke Gemara kama ọ bụ ụzọ ndị ọkà mmụta-Lithuania na-akwa emo arịrịọ maka ntụaka abụọ. Ihe atụ si n'aka ndị ọkàikpe na-adịghị na-aga Cheshin nke ọma ikwubiga okwu ókè uri, o nwere ọtụtụ ihe ịga nke ọma na ihe atụ dị oké njọ, dị ka ị maara na m na-arụsi ọrụ ike ụbọchị ndị a na ozizi nke ezigbo onye Juu mgbe ndị gụsịrị akwụkwọ na n'elu Ụlọikpe Kasị Elu na. ebe ihe kwesiri ikiri.
M boro gị ebubo na ị na-ejikọta ya na ụdị karịa ọdịnaya, ya bụ, otu ihe ijuanya - ọzọ, ịchị ọchị. Onye ọ bụla na-ekwusi ike na-eme ndị òtù ụlọ ọrụ ya ọchị ugboro ugboro, ọ bụ kpọmkwem n'ime ya ka mmadụ ga-eche na arụmụka ya adịghị eme nke ọma. Ma ọ bụ, ịkọwapụta asụsụ nke ịdị nsọ gị: "Nchị ọchị dị n'elu bụ nke a na-ahụkarị na ọ dịghị mkpa (a na-ejikarị ya eme ihe mgbe arụmụka ndị dị mkpa kwụsịrị)."
Aghọtara m n'ezie na n'omume m na-ezute ụdị nzaghachi a site n'aka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, nke a na-akwadokwa echiche ndị dị otú ahụ na nke dị otú ahụ, naanị m na-eme mkpesa na ụdị mkparị (n'adịghị ka ụmụ akwụkwọ PhD na okike na ụlọ akụ na ụba, bụ ndị zụlitere nke ọma omume ezi uche, karịsịa mgbe). Na nkà mmụta sayensị nke ịkwa ụta ”), ya bụ, anyị laghachiri ọzọ, na nke ugbu a, m ga-ehota okwu m dị nsọ,” na arụmụka mgbe niile dị ebe a, banyere nlelị na enweghị mgbakwunye nke. mkpa maka ọnọdụ, ikuku na agụmakwụkwọ. "
T. Benisan 10 - 04/2022/14 na 17:XNUMX
Mana ntụaka abụọ ahụ na-efu na Gemara n'onwe ya. Nke a abụghị ihe ndị Lithuanians chepụtara. Ọkà mmụta Lithuania na-arapara nanị n’ihe dị n’ebe ahụ, nzọrọ ya bụ na ntụaka abụọ ahụ bụ ihe ziri ezi kpam kpam kama na ọ bụghị ihe e ji amụ okwu ahụ, n’ezie ọ dịghịkwa egosi n’ụzọ ọ bụla omume ọma ma ọ bụ ntụpọ.
Aghọtaghị m ihe ị na-ekwu gbasara ụdị ahụ. Enweghị ọchị ebe a. Ndị a bụ arụmụka zuru oke nke ndị nzuzu / ikike nke ngalaba okike. Nke a bụ ihe ha na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. Ihe m kwuru banyere ụmụ nwanyị niile, ọbụlagodi ndị na-adịghị amụ gbasara nwoke na nwanyị (ọtụtụ n'ime ha dị ka m), ekwuru m na arụmụka ndị dị otú ahụ bụ ụdị nke ụmụ nwanyị, echere m na ihe ndị a bụ eziokwu sitere na ahụmahụ m. Enweghị arụmụka ebe a ma ọ bụghị nleba anya n'eziokwu.
10 na Nissan 04 - 2022/15/47 na XNUMX:XNUMX
N'ezie, dị ka m degara Sera akwụkwọ, ọ dịghị ihe ọjọọ ọ bụla ebe a, ahụrụ m na Facebook nke otu n'ime ndị ọkà mmụta ọ tụrụ aro banyere otu ihe atụ ndị Tractate Yavmot na-eweta ugboro ugboro Reuben na ndina n'ike ya, ka o wee dị mma idobe. nsọpuru Reuben na Shimon, nēnye kwa ihe-atù nke Arida na Delphon na umu-ndikom Heman iri fọduru. (N'aka nke ọzọ e nwere ọnọdụ a na-ekwu n'ihi Purim na ọ pụtaghị ma ọlị) Ibo ndị na-amụ gbasara nwoke na nwanyị ebubo na ha ebughị n'obi n'ezie ma nzube ha bụ ibipụta akụkọ, nke a bụ nkwutọ na ọ bụghị a. nlebanya n'eziokwu.
T. Benisan 10 - 04/2022/10 na 23:XNUMX
Nkọ dị ka mgbe ọ bụla. ị mere nke ọma.
Ụfọdụ echiche anaghị edozi:
A. Ihe ọchị nke anụmanụ ya agbagharala. (Aga m ekwupụta na agbagharakwa m ya na ọgụgụ mbụ)
B. Echere m na nke ahụ na-enyere nwa ahụ nọ na Hyder aka n'eziokwu na ọ na-emepụta ihe na Gemara. Ọ bụrụ na onye bench ya ajụọ ya ihe bụ kpọmkwem ihe si n'ebe ọ bụla pụta, ọ ga-amalite ịrapara n'ahụ́.
nke atọ. Ọ bụrụ na nwunye m agwa m na ya hụrụ òké e gwepịara egwepịa n'okporo ụzọ, na-enweghị ndakpọ nke ọdịdị ya, ọ gaghị eme m ka ọgbụgbọ. M gwa ya - ọ na-agbọ agbọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ewepụtara onwe ha eziokwu ha na-agụ banyere ya wee hụ ya n'ụzọ ụfọdụ ma ụfọdụ adịghị eme ya. Otu nwere ike ịgụ Harry Potter wee hụ ihe nkiri ahụ wee sị - M n'ezie echeghị ya otú ahụ! Onye ọzọ echeghịkwa m. Ekwenyere m na ozizi na Bar Ilan na-aghọta na abụọ anya, ma na-enweghị ike iche n'echiche ọnọdụ maka onwe ha.
D. Dị ka otu ihe ọ pụtara, echere m na ọ bụrụ na mmadụ enweta ọnọdụ ọ na-amụta n'ezie, ọ ga-esikwu ike ikewapụ ya. Ọ ga-esere onwe ya ihe ozugbo ka ọ na-enweta ya. Ihe ọzọ mere ọ na-adịrị nwatakịrị nọ na Hyderabad mfe ịmụta banyere ịbịa n'ụzọ na-ezighị ezi na ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị nke ụwa ya nke ukwuu.
Chineke. O nwekwara ike ịbụ na ọchịchọ ime ihe ọhụrụ, bụ́ nke dị na ụfọdụ ndị na-amụ ihe, na ime ka ha si n’ụwa ha banye n’ụwa Talmud ma ghara ịbịa kpam kpam dị ka ndị nnata, na-eme ka mmụta ghọọ mmetụta uche.
na. Obi abụọ adịghị ya, nkwụsị nke mmetụta uche na-enye aka n'ịghọta okwu ndị ahụ nke ọma. Ị ka nwere ike tufuo ihe ma ọ bụrụ na ị jikọọghị mmetụta ahụ na ya ma emechaa. The omume m n'ezie ga-jikọọ iji ghọta okwu, ma eleghị anya na mmetụta mmetụta nwere ebe ahụ ebe.
(Aghọtaghị m ihe nsogbu bụ na tubing ọbara. Adịla ebufe ọbara site tubes na ndị ọrịa? Ọ gaghị ekwe omume ibufe ọbara sterilely n'etiti ward site tube? Maka nsị mmiri? Ekwesịrị inyere vampire aka ịkwaga ọbara site na mpaghara ebe ọ na-egbu mmadụ gaa na kichin na ọkpọkọ, otu ị ga-esi wuo ya, wdg. Ma nke ahụ bụ ajụjụ na-emeghị ihe ọjọọ.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 na 21:XNUMX
A. Ma eleghị anya, ị tụfuru ya. Ma ọ bụghị m. Onye nkatọ ọ bụla nọ n'ọnọdụ ya guzoro n'agbanyeghị ajụjụ ọchị.
B. N'ezie, ọ dị ka ịjụ R. Chaim ihe pan bụ.
nke atọ. nke a dị mma. Enweghị m nsogbu na ndị na-egosipụta ọnọdụ n'uche ha, na ndị ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ. Echeghị m na ihe ịma jijiji a na-egosi omume ọma ime mmụọ, ma ọ bụ na enweghị ya na-egosi ntụpọ.
D. Lee c. Nke a nwere ike jikọta na okwu m na-achọghị na njedebe nke kọlụm banyere ntụpọ dị na ọmụmụ ihe n'onwe ya.
Chineke. Maka ahụike. Enwere nkwupụta ọ bụla ebe a? Anaghị m emeso nchoputa nke ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ, kama ọ bụ isi ihe. Ọ bụghị ebe o si bịa kama ma ọ dị mkpa ma dị mkpa.
na. Akọwara m ebe ọ nọ.
Aghọtaghị m ihe nsogbu bụ na ajụjụ gbasara vampire. Ahụghị m nsogbu ọ bụla na ya.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 na 10:XNUMX
A sị ka e kwuwe, e dere Gemara na nkà nke mkpirisi ike. (Nke a bụ otu n'ime ihe ịtụnanya dị n'ebe ahụ, nye m, onye na-agụ ihe tụrụ n'anya).
Ụwa-ụwa nwere ike ịpịaji n'ahịrịokwu okwu atọ, paragraf nwere ike ịnwe oghere nke narị narị afọ, kedu ka ntụnyere PSD nke Kasị Elu si dị? Ihe dị n'otu ahịrịokwu dị mkpụmkpụ ma dị nkọ nke Gemara gaara wụfuru ebe ahụ n'ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ narị ibe.
Anaghị m enyo ndị omenkà okwu ikpeazụ nke ibe Talmudic enyo ndị na-enwechaghị mmetụta karịa nwanyị ọ bụla na enweghị onye ọka ikpe kacha elu.
Ma anyị ga-echeta na ọ malitere n'oge gara aga, na mgbe ahụ enweghị ụzọ e si ede ihe, mkpa iṅomi na ichekwa ọgbọ n'ọgbọ.
Ma eleghị anya na-enye ihe atụ? Kedu ihe na kedu ka ị ga-esi tinye na Sugia Danan?
10 na Nissan 04 - 2022/15/39 na XNUMX:XNUMX
Ekwenyere gị, ma ọ bụghị m ka m degharịa Gemara ahụ. Ntụnyere ikpe nke oge a metụtara ikpe nke oge a. Ma eleghị anya, n’ụzọ onye rabaị si akụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe. Echere m na ọ bụrụ na nke a bụ onye rabaị ọ na-akụzi, ọ ga-akụziri ụmụ akwụkwọ ya okwu a, mana a ga-enwe obere mmegharị ahụ ihe atụ. Wink, kwuo na ihe ndị yiri ya. Akụkọ banyere ọnwụ na oke oke mmiri enweghị ihe omume ọ bụla, naanị ọdachi nke nwere ike ime ọbụna taa na Ukraine, ị nwere okwu na-adọrọ mmasị, banyere ọnụ. Ị na-atụ aro na e nwere ụfọdụ mmegharị ahụ ndị na-edobeghi na nkenke ederede nke ederede maka emechaa? Amaghị m ma echeghị m na e nwere ụzọ isi mara. Ikekwe ọ bara uru ịgba ndị ọkachamara aka ebe a ma ebe ọ dị na Shas enwere àgwà 'mmetụta' dịtụ karịa n'ihe. Dịka ọmụmaatụ, na ibe taa, e nwere nkebi ahịrịokwu dị mma nke pụtara ọtụtụ oge - ànyị na-emeso ndị ajọ omume? Nke a bụ okwu n'ezie n'ezie, mana ọ nwere ụda egwu nke mgbagwoju anya.
Oge Torah na oge ekpere (maka Sarah na anụmanụ ya)
10 na Nissan 04 - 2022/16/03 na XNUMX:XNUMX
Ya na Sarah - ndewo,
Ndị Tannaim na ndị Amoraim ndị nwere Halacha - nwekwara akụkọ akụkọ na ndị dere ekpere. N'okwu ha na Halacha - jide n'aka na ị ga-emepụta okwu n'eziokwu. Ọ bụ ezie na ụwa mmetụta uche ha - gosipụtara n'okwu ha na akụkọ akụkọ na ekpere ha tọrọ ntọala (ụfọdụ ọmarịcha ekpere onwe onye kwuru Tannaim na Amoraim 'Batar Tzlotya' gbakọtara na Tractate Brachot, na ọtụtụ n'ime ha gụnyere na 'Siddur') . Oge Torah iche na oge ekpere iche iche.
Daalụ, Hillel Feiner-Gloskinus
Ma ọ bụghị dị ka ọchịchọ nke ndị ọkà mmụta Torah taa ijikọta ọmụmụ ihe na mmetụta uche, nke a ga-ekwu banyere ya: 'Onye na-akụziri nwa ya nwanyị Torah - na-akụzi ekpere 🙂
'Laghachikwa n'obi gị' - itinye ọdịnaya nke ọmụmụ ihe n'ime obi gị
Iri na abụọ nke Nissan 12 - 04/2022/16 na 51:XNUMX
Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe aghaghị ịbụ 'ụbụrụ na-achị n'obi'. Ọmụmụ Torah chọrọ ige Torah ntị nke na-adịghị ekwekọ mgbe niile na ọchịchọ nke obi - ka emechara, mgbe nkọwa nke echiche - anyị ga-ebufe ihe n'obi na ọchịchọ ịmepụta njirimara onwe onye na ndị mmụta.
Lee isiokwu nke Rebbetzin Ma ọ bụ Makhlouf (Ramit na Midreshet Migdal-Anaz), na faịlụ "N'ihi na ha bụ anụ ọhịa," Migdal Iz Tisha: 31, p. 0 gaa n'ihu. N'ebe ahụ ọ na-ehota, tinyere ihe ndị ọzọ, mgbu nke Grid Soloveitchikf, ultra-Orthodox ntorobịa bụ onye gara nke ọma na ngalaba nke ọgụgụ isi… nwetara ọmụma nke echiche na mkpebi. Ọ na-enwe ọmarịcha nkuzi ma na-abanye n'okwu dị mgbagwoju anya. Ma obi ka na-adịghị ekere òkè na omume a… Halacha adịghị aghọ a psychic eziokwu maka ya. Ezigbo imata Shekinah adịghị efu… '209 Okwu Echiche, p. XNUMX). Rụtụ aka na edemede ogologo
Ka amara na Torah chọrọ ka eme ka obi rụọ ọrụ n'ihu na mgbe ọ gasịrị. Tupu ya - ọchịchọ ijikọ Chineke site n'amamihe na ọchịchọ ya na Torah na ekpere na anyị ga-enwe ikike iduzi eziokwu; Ekpere na-esochi ya bụ́ nke anyị ga-enwe ihe ùgwù itinye ụkpụrụ ndị anyị mụtaworo banyere ya ná ndụ.
Iri na abụọ nke Nissan 12 - 04/2022/16 na 56:XNUMX
Paragraf nke 1, ahịrị 4
njirimara onwe onye na onye mmụta…
'Mma agha dị n'agbata apata ụkwụ ya na hel ghere oghe n'okpuru ya' na-achọ mkpebi siri ike ma dị jụụ
T. Benisan 10 - 04/2022/14 na 57:XNUMX
Na SD XNUMX na Nissan P.B.
Onye na-ekpe ikpe n'ime mkpebi ya aghaghị ime ihe site n'oké ifufe nke mmetụta uche abụọ. Ahụhụ ga-adịrị ya n'otu akụkụ na ahụhụ ga-adịrị mkpụrụ obi ya ma ọ bụrụ na o mehie wee hapụ nwunye nwoke, ma n'aka nke ọzọ ahụhụ ga-adịrị ya ma ọ bụrụ na ọ na-arịlịka nwanyị nwere ike kwere. Ilu na-achị onye nke na-azọ ije n'ụzọ dị warara n'ọnụ abis, na ihe ọ bụla n'ebe aka nri ma ọ bụ aka ekpe nwere ike imebi ya n'ime abis.
Na onye na-ekpe ikpe aghaghị inwe nchegbu abụọ, n'ihi na enweghị mmasị ga-eduga ya n'ọchịchị na-ezighị ezi n'ihi enweghị mmasị, na onye na-atụ egwu Chineke ga-elekọta, na-eche na ọ gaghị ada ma kwe ka ihe a machibidoro iwu, na-eche na ọ gaghị egbochi. ihe kwere ekwe. Nchegbu ya na nchegbu ya na a ga-ebipụta ikpe ziri ezi - bụ ebumnobi ya maka ịchụso eziokwu ahụ n'akwụsịghị akwụsị.
Ma oke ọgbaghara nke mmetụta uche nke gbochiri ya ịkọwapụta halakhah - ya n'onwe ya chọrọ ka e mee nkọwa ahụ n'onwe ya n'ụzọ dị jụụ na n'ụzọ dị jụụ, n'ihi na nkọwa nke nchegbu na enweghị uche - enweghị ike imeri eziokwu ahụ. Ya mere, onye na-ekpe ikpe ga-adị jụụ n'oge a na-ajụ ajụjụ, ma dị njikere ịtụle nhọrọ niile, ọbụna ndị kacha egbu mgbu. Ya mere, mgbe ajụjụ ahụ bịara - onye na-ekpe ikpe ga-etinyerịrị oké ifufe nke mmetụta uche ma chee echiche nke ọma.
Na nke a, onye halakha dị ka dike a na-agbagbu, onye na-agaghị emeghachi omume ozugbo. Ọ ga-akwụsịtụ obere oge, kpuchie ya, lelee ebe a na-agbapụ ya, wee gbatịa wee gbapụ nke ọma na ebumnuche ya. Mmejọ nke ịkụ onye iro dị ize ndụ maka onye na-agba ụta, ebe ọ na-arara onye iro ahụ ebe mgbaba maka ya.
Ya mere, ọnọdụ nke onye nnapụta na-abịarute n'ihe egwu dị egwu, ọtụtụ ndị na-adịghị ike na ọtụtụ ihe egwu, onye ga-agụrịrị ọnọdụ ahụ ngwa ngwa, ma debe ihe ndị ka mkpa. Gwa ihe dị ize ndụ ozugbo, dozie ihe dị ngwa ngwa ngwa, ma hapụ ọkwa ikpeazụ nke na-adịchaghị ngwa ngwa. Nleba anya ọnọdụ ọnọdụ - bụ ntọala maka ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Ọchịchọ siri ike iji merie agha ahụ ma ọ bụ chekwaa ndị merụrụ ahụ - bụ mmanụ ọkụ nke kpaliri onye agha ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ iji wepụta onwe ya maka ngalaba agha ma ọ bụ ike nnapụta, ma mkpebi nke ihe na otu esi eme na ọnọdụ 'malfunction' - ga-emerịrị. na gbakọọ na nwayọọ ikpe.
N'ezie ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iche echiche nke ọma mgbe ị na-ezute ihe ndaba na-atụghị anya ya, na n'ihi nrụgide mmadụ na-echefu 'echiche' dum. Iji mezuo nke a, ndị ọkàiwu halakhic, ndị na-alụ ọgụ na ndị ọrụ nnapụta na-ejide 'ọzụzụ ọzụzụ' nke na-agbalịsi ike ịtụ anya 'blatam' ọ bụla nwere ike ime, na-emepụta usoro ihe omume n'ihu maka otu ọnọdụ nwere ike ime, na ndị na-eme ihe adịghị emeghachi omume n'ọnọdụ ọ bụla. Mgbe ahụ, mgbe 'malfunction' rutere - atụmatụ ime ihe ga-apụta ozugbo ma ị nwere ike ime ihe n'usoro n'usoro n'emeghị ka asịrị ọzọ. E chepụtara atụmatụ ndị ahụ wee rụpụta ya n'ihu.
Ihe omume Tractate Yavmot. Ọdachi nke ala ọma jijiji na ụlọ dakwasịrị, ọrịa na ọrịa na-efe efe, efu nke ndị mmadụ na njem njem ahia na imikpu ụgbọ mmiri n'oké osimiri, agha na ndepụta na ibé - bụ kpamkpam kwere omume ọnọdụ n'ụwa ebe ndị amamihe bi, karịsịa n'oge ndị Rom nnupụisi. Oké Mgbukpọ ahụ na nnupụisi nke Bar-Kochba.
Akwụkwọ ntuziaka maka ọgwụgwọ dị irè nke ọnọdụ nrụgide ọdachi ga-abụrịrị ihe dị mkpa na nkenke, na n'ụzọ doro anya na nkenke na-agụnye usoro niile nke ọnọdụ ndị nwere ike ime ma nye ha usoro ọgwụgwọ, ya mere, a na-emepụta ihe mkpuchi Yavmot n'ụzọ dị mkpirikpi na nke akọrọ, dị ka a. A ga-emepụta akwụkwọ na tiori ọgụ ma ọ bụ enyemaka mbụ.
Daalụ, Hillel Feiner Gloskinus
Na Mishnah na Talmud, okwu 'telegraph' na-agba mbọ ibuga ha n'ọnụ. Ka ha wee nwee ike iburu ha n'isi, a ghaghị ịhazi ha n'ụzọ dị mfe ma na-adọrọ mmasị. Mkparịta ụka miri emi ruo ogologo oge ma ọ bụ nkwuwa uche adịghị aba uru site n'isi. Talmud bụ maka ọmụmụ ihe omimi, na ekpere bụ maka mwụsa nke mkpụrụ obi. 'Sub' ga-abụrịrị nkenke na nkenke
'Willen kpọrọ Jekọb aha n'abalị ahụ' - oké ifufe nke mmetụta uche nke chọrọ ime ihe dị jụụ
T. Benisan 10 - 04/2022/15 na 15:XNUMX
Ya mere Yaakov Avinu, onye na-ekpe ekpere na nchegbu na nchegbu, 'Biko zọpụta m, ozugbo, nwanne m nwoke, ozugbo mee ... ka ọ ghara ịbịa kwadebere nne maka ụmụ nwoke' - na-aga n'ihu na-eme nwayọọ. Ọ naghị ebido ịgbapụ ozugbo. N'ụzọ megidere nke ahụ, ya na ndị agha ya na-arahụ ụra (ma ònye pụrụ ịrahụ ụra n'ọnọdụ a jọgburu onwe ya?) Ma bilie ọhụrụ ka ha nwee ike ibuso ndị agha Isọ agha.
Ma Devid b͕alaga-kwa-ra n'iru Absalom nwa-ya, mb͕e ọ gara tiwa, tie nkpu, kpere ya nzọputa n'aka ọtutu ndi nēbili imegide ya, bú ndi Israel nile megide nju-aka nke ndi kwesiri ntukwasi-obi ndi ya na ha nọ. Ọ na-egosipụta nchegbu ya nile n'ekpere, ekpere ya na-enyekwa ya ume iji mee ihe n'ikpe ziri ezi. Ọ na-anwa ụzọ nke ịrịọchitere site n'izite ndị mmụọ ọgụgụ isi iji mebie ndụmọdụ Ahitofel, ma mgbe o kpesịrị ekpere na ịrịọchite ọnụ, a na-azụlite ya na obi ike na ya, ma nwee ike n'ọnọdụ ya jọgburu onwe ya ijide 'n'udo, m ga-edina ala rahụ ụra. n'ihi na Gi onwe-gi bu Jehova, nání Ya.
A na-egosipụta nchegbu n'ekpere, a na-esikwa na ya zụlite mmadụ iji ezi uche mee ihe.
10 na Nissan 04 - 2022/16/59 na XNUMX:XNUMX
Kwekọrịtara ihe niile ị na-ekwu.
Na ọbụna n'ime halakhah ọtụtụ ugboro a na-echekwa mmetụta dị ukwuu. Na n'ezie nchikota nke akụkọ ifo na halakhah na-enye ohere nke a ruo n'ókè ụfọdụ,
Dịka ọmụmaatụ (anụmanụ ya) nke na-emetụ n'obi, n'uche nke m: (M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere onye ọka ikpe na Ụlọikpe Kasị Elu nke kwere ka onwe ya wụfuo nke ukwuu)
10 na Nissan 04 - 2022/17/14 na XNUMX:XNUMX
n'ezie. Ha na-ehota ya.
10 na Nissan 04 - 2022/17/45 na XNUMX:XNUMX
Kwuo ee, mana ejighi n'aka na ha gaara ebute ụdị nkwupụta ahụ.
Site n'ụzọ, ị nwere ike ịhụ ogologo oge ikpe ndị ahụ na-agbatị ma na-agwụ ike, n'ime afọ ndị gafeworonụ, mgbe aka na-aghọ ìhè na keyboard, na isi mmalite niile dị, ọ dịghịkwa mkpa ka ọ gwa onye nta akụkọ.
'Na-akụzi na ọ naghị ehi ụra' - n'agbanyeghị ịnụ ọkụ n'obi
Iri na abụọ nke Nissan 13 - 04/2022/00 na 04:XNUMX
BSD XNUMX na Nissan PB
Na mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe ahụ iru ala mgbe ị na-eme ya, Hasidim mere ka isiokwu onye amamihe ahụ doo anya 'Ee, Erọn mere - na-akụzi na ọ naghị ehi ụra', na a ghọtaghị ihe bụ 'Salka Da'ata' nke Aaron Gd dị nsọ na-ehi ụra site na Chineke. iwu-nsọ? Ndị na-eso ụzọ ahụ kọwakwara na ọ bụ ezie na Erọn nwere nnọọ mmasị mgbe ọ na-amụnye oriọna ahụ na e nwere ohere iji chee na n'ihi ịnụ ọkụ n'obi na ọ ga-ehie ụzọ na nkọwa. KML onye, ​​n'agbanyeghị na a kwụgburu ya, na-akpachapụ anya na-arụ ọrụ ya nke ọma.
10 na Nissan 04 - 2022/17/22 na XNUMX:XNUMX
Banyere nkwupụta ngwá ọrụ (nke m na-adịghịkwa anabata), na eri ị meghere na IDF, ikekwe ndị Sura bụ ihe atụ dị oke egwu nke nkwupụta a n'okwu enweghị echiche. https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
10 na Nissan 04 - 2022/19/06 na XNUMX:XNUMX
N'ezie, n'ebe ahụ na Rami Bar na-agụgharị ihe bụ ọdachi na ihe ọchị n'otu ebe. Ma n'ebe ahụ ka a pụrụ ikwu na ebe ọ bụ na e meworị ihe, ha jụrụ ya maka omume ya. Ma o doro anya na ọ chọghị ịdabere na tebụl ndị ọzọ
10 na Nissan 04 - 2022/22/20 na XNUMX:XNUMX
Enwere ebe maka "mmetụta na-achị" dị ka Gemara si kwuo mgbe otu abụọ na-abịa na-arụ ụka n'ihu Dayanim ma ọ dịghị mkpebi doro anya, ihe a na-akpọ "Shuda Dadayin".
11 na Nissan 04 - 2022/00/07 na XNUMX:XNUMX
Shuda Dadaini bụ ikpe n'okwu ndị a kapịrị ọnụ ọ bụghị n'ọnọdụ ọ bụla na-enweghị mkpebi. Maka nke a enwere iwu nke izu oke. Ma ọbụna Shuda abụghị mmetụta kama ọ bụ echiche. Unu ebula ibe unu agha.
10 na Nissan 04 - 2022/23/16 na XNUMX:XNUMX
N'uche nke m, ọ bụ eziokwu: mmadụ malitere mkparịta ụka n'ịntanetị banyere ajụjụ a "Ọ bụrụ na ị chọpụta echi na Iso Ụzọ Kraịst bụ eziokwu - ị ga-agbanwe ndụ gị otú ahụ". Ụfọdụ azịza ndị nzuzu bụ "ọ gaghị eme, ọ nweghị uru ịjụ". Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịghọta akụkụ nke ajụjụ echiche. M gbalịrị ịkọwara ha na ha na-eleghị anya ọ dịghị mgbe ọ ga-atụba a nnọọ abụba onye na ụgbọ okporo ígwè iji gbochie ụgbọ oloko si efehe karịrị ise mmanye, ma nke a bụ isi ajụjụ na ọmụmụ na nkà ihe ọmụma nke omume; Mana ọ naghị arụ ọrụ…
Mgbe ahụ, mmadụ rụrụ m ụka na ụkpụrụ echiche ajụjụ dị mma, ma e nwere ihe ndị na-awụ akpata oyi mmetụta uche na ya mere ọ bụ ihe na-ezighị ezi na-atụle ha hypothetically (ma megide, sịnụ, ịzọda onye buru ibu nke ukwuu n'ụgbọ okporo ígwè) eleghị anya ọ bụghị ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọlị). Onye edemede ahụ bụ R.M. na ụlọ akwụkwọ sekọndrị yeshiva, na o doro m anya ihe ọ na-eme n'okwu ndị dị ka nke ị kpọtụrụ aha ebe a ... Otú ọ dị, mgbe obere arụmụka gasịrị, ọ jụrụ m ma m chere na ọ bụ ihe ziri ezi ka ọ jụọ m " gịnị ka ị ga-eme ma ị chọpụta echi nne gị na-egbu" . N'ezie, aghọtaghị m ihe nsogbu bụ na na, na m ọbụna gara ịgwa nne m, bụ ndị na-aghọtaghị ihe nsogbu bụ ajụjụ a ... ihe nakwa mgbe arụmụka ọ n'ezie jụrụ ajụjụ, otú ahụ ka m na-emeghị. ghọtara nke ọma isi ihe ọ na-achọ ịkọwapụta.
N'okpuru ala - mgbe ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịnagide ọdịnaya (n'uche!) Ha na-agba ọsọ na njedebe ma gbalịa igosi 'nsogbu' ịchọ mma dị ka ihe ngọpụ ihe kpatara na mbụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị' itinye aka na ọdịnaya a (mgbe ahụ. ọ hapụrụ ịmụta naanị Akụkọ mara mma nke ukwuu).
11 na Nissan 04 - 2022/00/11 na XNUMX:XNUMX
n'ezie. M nnọọ na-ekwu na e nwere ohere n'ihi na ọ na-ekwu banyere Christianity n'ụzọ na-esonụ: ikekwe n'echiche ya ma ọ bụrụ na Christianity mere uche mgbe ahụ ọ bụghị Christianity ka anyị maara. N’ihi ya, o nweghị ohere maka ajụjụ nke ihe m gaara eme ma a sị na m chọpụtara na Iso Ụzọ Kraịst ziri ezi. N’otu aka ahụ, o nweghị ohere maka ajụjụ nke ihe Maimonides gaara ekwu banyere ọnọdụ ọ bụla n’oge anyị. Ọ bụrụ na ọ dị ndụ taa, ọ gaghị abụ Maimonides.
10 na Nissan 04 - 2022/23/29 na XNUMX:XNUMX
Ndewo Rabbi Michi.
O siri ike ịrụ ụka na nkwupụta gị, n'ezie na "echiche nkịtị" o doro anya na ihe kachasị dị ọcha na nke ziri ezi bụ ịrụ ọrụ na net halakhic rational analysis. Mana ọ gaghị ekwe omume ileghara eziokwu ahụ anya na ọtụtụ oge okwu Shas nke ndị ọkà mmụta na-ejikọta ya na akụkọ ndị na-enye ha ịgụ ntụziaka mmetụta uche nke mmadụ ma ọ bụ omume.
M ga-enye ihe atụ 2 (nke mbụ dị ntakịrị ike): Mgbe Tractate Gittin kwurịtara nkọwa nke nsogbu dị iche iche nke echiche na ezi uche, ọ na-echegbu onwe ya iji kwụsị okwuchukwu banyere ịkpọasị na ịgba alụkwaghịm. Na otú ọ na-ewute Chineke maka ịgba alụkwaghịm n'onwe ya. Gịnị mere o ji dị mkpa ka Gemara kwụsị Tractate otú a? Ọ bụghị ebe a ịgụ ntụziaka?
Na Gemara na Kiddushin enwere akụkọ mara mma gbasara Rabbi Asi na nne ya. Ọ dị ezigbo mkpa na ọ debanyere n’ime iwu nile nke Miriam, Isi nke XNUMX, na Maimonides. N'ọgwụgwụ nke mbipụta ahụ, e dere na Rabbi Asi kwuru "Amaghị m Nafaki" Ọtụtụ ndị na-akọwa nkọwa kọwara ahịrịokwu a site na ugegbe halakhic. Rabbi Asi kwuru na ya agaraghị ahapụ ala Izrel n’ihi ọtụtụ ihe kpatara ya (adịghị ọcha nke mba dị iche iche n’ihi na ọ bụ onye nchụàjà na ihe ndị ọzọ). Maimonides dere na Halacha na n'ezie ọ bụrụ na a ghọgbuo ndị mụrụ ya na ọ nwere ike ịkasi ya obi ma nye onye ọzọ iwu ka ọ lekọta ha. Ego Mishnah na-ewusi Maimonides ike ma kwuo na ọ bụ ezie na e deghị ya hoo haa n'okwu ahụ, o yikarịrị ka Rabi Asi na-emebu. Rabbi wesara Maimonides iwe ma kwuo na ọ bụghị otú a na otú mmadụ pụrụ isi hapụ ndị mụrụ ya nye onye ọzọ ilekọta ha. (Enwere ike ịrụ ụka na nke a bụ echiche halakhic mana ọ na-egosi na ọ nweghị ike ịnabata echiche nke omume ọma) Ọ nweghị okwu = Agaghị m ahapụ Babilọn. Ma na-ezo aka na mbuso agha Rab'ad wakporo Maimonides.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ tụgharịrị na n'ezie halakhic ikpe ziri ezi na Maimonides na ego ihe ma anya anyị na-ahụ na a ọkà mmụta na ọkàikpe agụwo akụkọ a na omume na a omume ihunanya ịgụ.
A na m atụle na ọ bụrụ na m nwere akwụkwọ Molly site n'aka onye ọkà mmụta, Rabbi Yehuda Brandes, "A Legend in N'ezie," m ga-enye ihe atụ ole na ole ma eleghị anya ndị na-aga nke ọma.
PS: Na-eche ma na-echere otu kọlụm na arụmụka ntụgharị ( ole ka ị nwere ike iguzogide?)
11 na Nissan 04 - 2022/00/13 na XNUMX:XNUMX
Enwere ihe atụ ole na ole n'ezie. Lee ihe atụ na kọlụm 214 n'elu ntụ ya n'ihi akụ ya. Mana nke ahụ abụghị ihe m na-ekwu ebe a. Ha chọrọ ịkụziri m na ịgba alụkwaghịm bụ ihe ọjọọ. Kedu ihe jikọrọ nke a na ịchị halakhah n'okwu ndị a? O nwere ihe jikọrọ ya na ndị isi izugbe na-eme ngagharị iwe megide halakhah na ekwesịrị ịgba mbọ gbanarị ịgba alụkwaghịm.
11 na Nissan 04 - 2022/09/36 na XNUMX:XNUMX
“Onye na-ekpe ikpe kwesịrị iche echiche nke ọma banyere ikpe na-abịara ya. Ihe halakhah na-ekwu enweghị ihe jikọrọ ya na ihe mmetụta uche na-ekwu (na n'uche m ọ bụghị ọbụna ihe omume na-ekwu), na ọ dị mma na ọ na-eme. Onye na-ekpe ikpe kwesịrị iji nwayọ gbupụ iwu ahụ, wee si otú a nwee ikike iduzi eziokwu nke Torah. "Ruo ugbu a okwu gị.
Enyere m ihe atụ sitere na akụkọ Rabbi Asi na nne ya onye a mara ikpe na Halacha. M mechara kwuo na Rabbi na ndị Rashash ekwenyeghị na ha n'ụzọ doro anya, n'ọnọdụ mmadụ ma ọ bụ omume.
11 na Nissan 04 - 2022/10/03 na XNUMX:XNUMX
A ka njọ ele mmadụ anya n'ihu see okwu jupụtara n'ihota ma ọlị. A sị ka e kwuwe, edere m na enwere ohere ịmebata echiche ndị dị otú ahụ na ọkwa B, mgbe anyị kwuchara okwu gbasara nhọrọ halakic bụ isi. Ọ bụrụ na ebipụghị iwu ahụ mana ọtụtụ nhọrọ dị, ụzọ isi kpebie n'etiti ha nwekwara ike ịnwe omume (na ikekwe mmetụta uche dị ka ihe ngosi).
11 na Nissan 04 - 2022/19/59 na XNUMX:XNUMX
1. Ma eleghị anya, nke a bụ otu n'ime ihe kpatara Gemara na-abụghị maka ụmụ nwanyị na ha anaghị eru eru ka ha kwurịta ya? (Ajụjụ anaghị ekpebi)
2. Eziokwu bụ na afọ mgbe m gụrụ "Bible Abụọ na Otu Ntụgharị" ahụrụ m akụkọ sitere na Torah na maka mụ na n'ihi ọgbọ nwanyị anyị enweghị mmetụta (ọ doro anya n'ezie) Ọ dịghị mgbe m na-akọrọ ya gburugburu m n'ihi na Enweghị m okwu iji gosi mmetụta m karịsịa na anyị na-arụsi ọrụ ike na mmetụta uche, a na m ugbu a, anaghị m echeta ọtụtụ ihe atụ ma e wezụga otu mgbe Elieza bịara na mkparita ụka iji were Rebeka (n'oge ahụ ụwa aghọbeghị otu ezinụlọ, ya nwere ike ịbụ nkewa zuru ụwa ọnụ site na ezinụlọ ya na ọ na-agbakwụnye ebe a na mmetụta mmetụta) na nna ya Betuel na nwanne ya nwoke Ben gbalịrị igbu oge na mgbe ahụ nwa agbọghọ ahụ (ịghara ichefu na ọ dị afọ atọ bụ isi ihe ọzọ na-eme ka mmetụta uche dị na ya. egwuregwu dum) Ndị amamihe na-ajụ na olee ebe nna ya nọ n'ụlọ nsọ? Ndị amamihe zara na ọ nwụrụ (rie efere nsi o doziri Elieza site n’aka mmụọ ozi nke nọchiri efere ndị ahụ dị ka a ga-asị na m bụ ihe ncheta nke hyder) na ekwuru ozugbo na ha jụrụ wee ziga Rebeka n’ụzọ, lee nwa nwoke ahụ. na-ajụ were were were ọnọdụ taa ụdị ọdachi dị otú ahụ Dom Eliezer ga-abụ ma ọ dịkarịa ala maka oge a na-atụ anya ya, ọ ga-enwekwa obere ihere site na klas ya dum na ịnọ n'ụlọ ugbu a n'ihu ọdachi ezinụlọ (ma eleghị anya na-agbalị ịkụnye ngwá ọrụ nwayọọ na hapụ ebe ahụ dị ka ọ bịara n'oge dị otú ahụ siri ike ma ọ bụ ọzọ site na ahụ erughị ala Ebumnuche nke ịbịa na-enyere aka na ahụ ya na mkpụrụ obi ya nile iji hazie olili ozu na iwu ụlọ ntu na iweta oche maka ndị na-eru uju wdg) ma na omume na Torah ụwa dị ka ọ na-adị na-aga n'ihu ma e wezụga na atụmatụ na-aga n'ihu dị ka echere na Autism, rabbi ebe a nwere ọgwụgwọ sitere na "Dauriyta" ka ọ nọrọ na ezigbo ụlọ ọrụ.N'ihe banyere Josef na nwanne ya, ee, ụmụ nwoke, otu a ka ọ dị (ihe ịma jijiji a nke Isọ emeghị ka ndị amamihe siri kwuo. Ọ bụ Mọdekaị onye Juu kwụrụ ya ọtụtụ puku afọ ka e mesịrị, dị ka a maara nke ọma). N'ofe bọtịnụ uwe elu ya, otu oge mgbe ndị ikpe nwara ịkpali mmadụ ịgba nwunye ya alụkwaghịm site n'ịgwa ya na e dere na ebe ịchụàjà na-akwa ákwá, ọ zara ha na ọ dịghị njọ ruo taa, akwawara m anya mmiri, ọ gaghị ewute ya ịkwa ákwá ole na ole. ugbu a kwa, nke nna nke hụrụ n'ụlọ nsọ ka ọ na-ama nwa ya nwoke ma n'ebe ahụ ka nna ahụ wee banye n'ọhụụ nke ụtọ asụsụ gara ma nye iwu ka a kpọpụta nwa ya nwoke ka ọ na-efegharị maka enyemaka maka egwu adịghị ọcha (kama ịkụ ọkpọ) na Gemara. na-akparịta ụka n'ebe ahụ nna a, ma ọ nwere oke nsọpụrụ ma ọ bụ "autism" n'ihe gbasara igbu ọchụ
3. N'okwu ndị rabaị kwuru "ọ dị ka ịjụ R. Chaim ihe pan bụ" ihe atụ nke rabaị adịghị aga nke ọma na m ga-eji akụkọ kọwaa nke a. Ikekwe maka onyinye na otu ụzọ n'ụzọ iri R. Chaim jụrụ ya ihe bụ ube oyibo. ? R. Avraham nwere mkpali wee sị ị ghọtara ihe ọtụtụ pụtara? Na n'ime ndị Babịlọn na ndị Jerusalem na ndị Midrashim na Tosefot na Zohar, wdg, okwu ube oyibo adịghị adị.
Akpọbuola Masach Pan na Torah ọtụtụ ugboro ebe a iji kelee onye rabaị maka "akwụkwọ nke rabbi edeghị" na-eso ọnwụ nke rabbi anyị n'idebe ọchịchị dị ka e nyere ya iwu ikwu ihe a na-anụ dị egwu) na ọdọ mmiri nke rabaị na-enwe mmasị igbu ehi dị nsọ site n'ebe ọ bụla ugbu a n'ime afọ iri atọ ya mgbe ọ na-ekpo ọkụ ọ na-adịkarị mfe na mgbawa nke Ụlọ Nsọ Ugwu Dome karịa ogbugbu nke ehi dị nsọ, otu oge ajụrụ m rabbi anyị na agbata obi maara nke ọma na nkwutọ ma e kwere m ịkọrọ otuto n'ezie (na m gbakwunyere na m na ọ bụ otuto dị ukwuu) mana ogbugbo onye na-anụ na-eche na akụkọ a bụ mkparị na m wetara dị ka ihe atụ akụkọ banyere R. Chaim (site n'ụzọ R. Chaim ga- na-ekpe ekpere banyere ya ugboro atọ n'ụbọchị ka ị ghara icheta ihe ọ bụla ma e wezụga nke a Torah ihe àmà ọzọ megide Rabbi Shefilot Assistants) na ọ dị m ka rabbi zara m na ọ nwere ike ịbụ ihe a machibidoro iwu na n'ime usoro ahụ gwara m na dịka nwa akwụkwọ yeshiva na America n'ebe ahụ. bụ ntuli aka onye isi ala m na-eche maka onye isi ala aha ya bụ Johnson na ha nwere onye ozi yeshiva nke aha ahụ na isi yeshiva ha na-emikpu n'ime mmụta mgbe ha gwara ya Rosh Yeshiva nọ na-eche ka onye ozi yeshiva si bụrụ onye isi ala United States n'otu abalị.
11 na Nissan 04 - 2022/20/15 na XNUMX:XNUMX
R. Chaim nke pan bụ R. Chaim nke Brisk
12 na Nissan 04 - 2022/01/06 na XNUMX:XNUMX
Ebee ka nke ahụ si abịa? N'ọnọdụ ọ bụla, isi ihe bụ na anyị abụọ kwetara na ọ bụghị R. Chaim Welder
12 na Nissan 04 - 2022/02/15 na XNUMX:XNUMX
A na-ekwu na Rabbi Chaim nke Brisk weere pans na ite ndị ahụ n'echiche, nke pụtara na ọ dịghị mkpa ka mmadụ mara kpọmkwem otú e si arụ pan na ihe dị n'agbata ogologo aka na dayameta nke elu, ma. kama ịmara ihe onwunwe ya chọrọ metụtara halakhah na halakhah. Ya mere, ọ bịara na ọ bụghị n'ụzọ a na-emekarị ka nwatakịrị ahụ adịghị mkpa ịghọta ihe ọ bụ kpọmkwem ma ọ bụ naanị na ha na-eme ihe ọ bụghị otú ọ na-eme na e nwere ụdị iwu dị iche iche, na nghọta halak ya adịghị emebi ihe ọ bụla.
N'ozuzu, dị nnọọ Rabbi Chaim bụ Rabbi Chaim nke Brisk (opekempe na ebe ndị Gemara na-emeso karịa Halacha), dị ka Rashba bụ nnọọ Rabbi Shlomo ben Aderet na ọ bụghị Rabbi Mishantz, ọ bụ ezie na nsọpụrụ nke abụọ dị ukwuu.
Iri na abụọ nke Nissan 12 - 04/2022/17 na 50:XNUMX
Rabbi ị mere m de jow maka akụkọ m nụrụ kpọmkwem n'okwu a:
Echetara m na n’ihe ọmụmụ m gara, onye rabaị nke kụziri ihe ahụ gwara anyị (ndị niile so na ya bụ ụmụ nwoke) na ọ kuziri nkuzi Gemara iji wuo ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ bụkwa na Tractate Yavmot.
Ọ gwara anyị na ya sere na bọọdụ ahụ dum "ezinụlọ" nke okwu ahụ wee tinye Xs na "ndị nwụrụ anwụ" niile wee leghachi anya azụ wee hụ na ihu ụmụ agbọghọ ahụ tụrụ egwu.
Ha nwere ọmịiko na "ndị nwụrụ anwụ" ndị e sere na osisi.
Ọ baghị uru ikwu, anyị niile chịrị ọchị ma chịa ọchị na akụkọ ahụ.
Jonathan Shalom nime Nachion Gbanye Site na ọnwụ nke Prof. David Halvani Weiss nwụrụ anwụ (kọlụm 485)
Yishai Gbanye Azịza nye ajụjụ gbasara ọmụmụ ihe